ညီမျှခြင်း thermomix မော်ဒယ်များ TM5, TM31 နှင့် TM21 | သာဓက
Thermomix မော်ဒယ်များအကြားညီမျှမှု: TM5, TM31 နှင့် TM21
၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလတွင် Vorwerk သည် ၄ ​​င်း၏လူသိများသောမော်ဒယ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့သည် TM5။ သုံးစွဲသူများစွာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်၎င်းကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပြီးအဟောင်းမော်ဒယ်များရှိသူအချို့က၎င်းတို့ကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ဤစက်များသည်သက်တမ်းရှည်စွာအသုံးချနိုင်သောကြောင့်ချက်ပြုတ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည် TM31 (၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်သည်) နှင့်အနည်းငယ်နည်းသည် TM21 (1996 ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်) ။ မော်ဒယ်အားလုံးနှင့်အတူချက်ပြုတ်လိုပါသလား။ ကောင်းပြီ, သင်သိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် အဆိုပါ Thermomix TM5, TM31 နှင့် TM21 မော်ဒယ်များ၏ညီမျှ.
ဒါဆိုဘယ်လိုလဲ သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု TM5 နှင့် TM31 အကြားတွင်စက်ရုပ် ၃ ခုအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုများကိုရှင်းပြသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်အသုံးဝင်သည်ဟုသင်ထင်မြင်မိသည်၊ သင့်တွင်သင်ရှိသည့်မော်ဒယ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ချက်ပြုတ်နည်းများကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်ပြီးအပြည့်အဝလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သက်သာခြင်း ထို့ထက်ကား၊ လုံခွုံရေး.
TM31 နှင့် TM5 အကြားညီမျှမှု
Thermomix TM31 နှင့် Thermomix TM5
ဒီမော်ဒယ်နှစ်မျိုးရဲ့ကွာခြားချက်ဟာ ၃၁ နဲ့ ၂၁ ကြားမှာအများကြီးကွာခြားတာမို့သင့်ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံအားဖြင့်အချက်နှစ်ချက်ကိုသာသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် အများဆုံးအပူချိန် နှင့် ဖန်ခွက်၏စွမ်းရည်နှင့် varoma ကွန်တိန်နာ။ အသေးစိတ်ကြည့်ရအောင်။
TM5 ၏အပူချိန်အမြင့်ဆုံးမှာ ၁၂၀ over ကျော်ဖြစ်ပြီး TM120 သည် ၁၀၀º သာရှိသည်။ ၎င်းသည် TM31 နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုဖွင့်ပေးသည်၊
Sautéedနှင့်sautéedTM5 မှာ ၁၂၀ ºနဲ့ ၈ မိနစ်ကိုပရိုဂရမ်သွင်းရမယ်။ TM120 မှာနေစဉ် ၁၀ မိနစ်လောက် varoma အပူချိန်ရမယ်။ အခုတော့ TM8 နဲ့အတူထမင်းကြော်ကြော်တွေဟာပိုကောင်းတယ်၊ ရွှေတွေပိုများတယ်။ ဥပမာ၊ ကြက်သွန်ဖြူကိုထမင်းချိုင့်ထဲထည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်သိသာသည်။
Varoma အပူချိန်: TM31 တွင်အရာရာတိုင်းအတွက် Varoma အပူချိန်ကိုအသုံးပြုသည်။ varoma နှင့်ပေါင်းပြီး၊ လှုပ်ခြင်းနှင့်ကြော်ခြင်း၊ ဝက်အူချောင်းများတွင်အရည်ကိုလျှော့ချသည်။ သို့သော် TM5 တွင်ရေနွေးငွေ့ကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် varoma အပူချိန်ကိုသာအသုံးပြုရမည်။ အဆိုပါ varoma ကွန်တိန်နာသို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်းကိုလျှော့ချ။
100ºမှာချက်နည်း: TM31 တွင် TM5 ၌ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့် ၁၀၀º ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အစားအစာနှင့်ဆန်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းရန်အားပေးသည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောချက်ပြုတ်သည့်နေရာ၌ဆက်လက်တည်ရှိမည်။
Varoma ကွန်တိန်နာစွမ်းရည် ၁၀% တိုးတက်ခဲ့သည်, TM3 ၏ 31 လီတာကနေ TM3.300 ၏5အထိ။
အဆိုပါ tank သည်လည်း၎င်း၏စွမ်းရည်ကို TM2 အတွက် 31 လီတာမှ TM2.200 အတွက်5သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်သင်သတိထားရမည်မှာ TM31 ချက်ပြုတ်နည်းများကို TM5 တွင်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဖန်ခွက်များပြည့်လျှံနေသောကြောင့်တစ်ခြားနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင် TM5 မှာ TM31 စာရွက်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အများဆုံးစွမ်းရည် signal ကိုကျော်လွန်မပေးကြောင်းသေချာပါစေ (2 လီတာ) ။
Varoma သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းတို့ကိုရေနွေးငွေ့များပိုမိုထည့်သွင်းနိုင်သည် နှင့်သူတို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားထက်ပိုမိုအားနည်းဖြစ်ကြောင်း, ရေနွေးငွေ့၏ကောင်းသောစောင်ရေမျက်နှာသာ။ ဥပမာအားဖြင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိသောနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုပင်လယ်ကမ်းခြေနှစ်ခုသို့မဟုတ် bream နှစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့မော်ဒယ်များပိုမိုရလိမ့်မယ်ကတည်းက puddings သို့မဟုတ် puddings များအတွက်စတုဂံသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီမှိုချပြီးမှကြွလာသောအခါ၎င်းသည်လည်းအကျိုးရှိသည်။
TM5 နှင့်အတူ အမြန်နှုန်း 10 သို့မဟုတ်တာဘိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ၁၀,၇၀၀ rpm အထိ (TM10.700 ၁၀,၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်) အထိ။ ၎င်းသည် gazpacho သို့မဟုတ် creams ကဲ့သို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုအချိန်တိုအတွင်းပိုမိုပါးလွှာစေသည်။
ညီမျှခြင်း TM31 နှင့် TM5 ၏စားပွဲတင်
ရေနွေးငွေ့ တောင်းနှင့် / သို့မဟုတ် varoma အတူ Varoma အပူချိန် Varoma အပူချိန်
Varoma အပူချိန် Varoma အပူချိန်
Sautéသို့မဟုတ်sauté Varoma အပူချိန် - ခန့် 10 မိနစ် အပူချိန်120º - ခန့် 8 မိနစ်ခန့်
အများဆုံးစွမ်းရည်။ ၏ ဖန်ခွက်2လီတာ 2,200 လီတာ
အများဆုံးစွမ်းရည်။ ၏ varoma3လီတာ 3,300 လီတာ
Mariposa မြန်နှုန်း5မှာအများဆုံး မြန်နှုန်း4မှာအများဆုံး
turbo (သို့မဟုတ်မြန်နှုန်း ၁၀) 10.000 rpm သို့ရောက်ရှိသည် 10.700 rpm သို့ရောက်ရှိသည်
TM31 နှင့် TM21 အကြားညီမျှမှု
ဒီမှာ ညီမျှစားပွဲပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ရာအတန်းကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ TM31 နှင့်ကိုက်ညီသောစာရွက်တွင်“ ဇွန်းနှုန်း” ဟုဖော်ပြထားပြီးသင့်တွင် TM21 ရှိပါကသင်လုပ်ဆောင်ရန်မှာလိပ်ပြာဖြင့်ပရိုဂရမ်အမြန်နှုန်း ၁ ဖြစ်သည်၊
ယခုတွင်သင်သည်သော့ရှိသည် အားလုံးချက်ပြုတ်နည်းများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် သင့်ရဲ့ TM21 မော်ဒယ်ရန်။
TM31 နှင့် TM21 အကြားညီမျှ၏စားပွဲပေါ်မှာ
ရေပုံးမြန်နှုန်း လိပ်ပြာနှင့်အတူ 1 မြန်နှုန်း
ခုတ်, မြန်နှုန်း4ခုတ်, မြန်နှုန်း3သို့မဟုတ်31/2
ဆန်ခါ, မြန်နှုန်း5ဆန်ခါ, မြန်နှုန်း 4
ဖျက်စီး7မှ 10 အမြန်နှုန်း ဖျက်စီး6မှ9အမြန်နှုန်း
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Mount, မြန်နှုန်း31/2 ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, မြန်နှုန်း3စီး
သင်မြင်ရမည့်အတိုင်းမော်ဒယ် ၂၁ နှင့် ၃၁ အကြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်။ ဥပမာနိမ့်ကျသောအပူချိန်သို့မဟုတ်ခုတ်ခြင်း၊ ဆန်ခါခြင်းနှင့်ဖျက်စီးခြင်း၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အမြန်နှုန်း။